Bogga ugu weyn Dib u eegista Buugga Farxadda: Farxadda waarta ee Isbeddelka
Isha sawirka: www.amazon.com
"Haddii dareenka farxaddu uu yahay qof dhab ah, waxaan ku xiri lahaa qolkayga weligood," ayay marwada ka hadashey wadahadalka.
In kasta oo ay khamri cabaysay, haddana fikradeeda malaha uma cadda sidii ay ahayd. Hal shay waa hubaal, si kastaba ha ahaatee: aad bay ugu baahnayd inay hesho farxad.
Adduunyo aad u badan, sidee baad ku heli kartaa farxad?
Buugga farxadda ee ay qoreen Dalai Lama, Desmond Tutu, iyo Douglas Abrams ayaa siinaya saldhig wax ku ool ah oo lagu hormarin karo laguna waarayo farxadda.
Maqaalkan waxaa ku jira dib -u -eegista buugga Farxadda.
8 -tiir ee Farxadda
Wadahadalka qoto dheer ee toddobaadlaha ah ee u dhexeeya labada gurus: Dalai Lama iyo Desmond Tutu waxay muujinayaan siddeed sifo oo ah tiirarka farxadda:
Erayada Dalai Lama, buugga farxadda dib u eegista “Dhacdo kasta oo nolosha ah, waxaa jira xaglo kala duwan.”
Qaadashada aragti naxariis leh waxay awood kuu siineysaa inaad fahanto dareenka iyo baahiyaha dadka kale, tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad noqoto mid naxariis badan. Inaad dhinacyo kala duwan ka eegto waxay siinaysaa qof kasta fursad cadaalad ah in la maqlo laguna tixgeliyo.
Archbishop Desmond Tutu ayaa tan ku tilmaamay mid qaadanaya "aragtida isha Ilaah."
Akhri: Awoodda Soo -koobista Buugga Hadda | 2022 Dib u eegid
Tiirka labaad waa samaan firfircoon; waa halbeegga is-hormarinta.
Hoos -u -dhigiddu waxay kaa caawineysaa inaad garatid inaadan ka qiimo badnayn ama ka yarayn qof kasta oo kale. Waxay kaa caawineysaa inaad aqbasho xaaladdaada aan dhammayska ahayn iyadoo isla mar ahaantaana aad ka shaqeyneyso dhisidda nooca ugu fiican naftaada oo aad si wanaagsan u saameyneyso kuwa kugu xeeran.
Dalai Lama wuxuu ku xusayaa qeyb duco ah oo si sax ah u noqon karta xusuusin: "mar kasta oo aan arko qof, yaanan weligay dareemin inaan ka sarreeyo."
Daraasaduhu waxay muujiyeen in kaftanka wanaagsani uu wanaajin karo caafimaadka maskaxda iyo jidhka, kor u qaadida soo jiidashada, iyo hagaajinta xirfadaha hoggaaminta.
Dalai Lama iyo Archbishop Desmond Tutu labaduba waxaa la sheegay inay yihiin laba majaajilo oo majaajilo ah sida laba hoggaamiye ruuxi ah oo sharaf leh, naftooda ku qoslaya, qaladaadkooda sida aadanaha, iyo dhibaatooyinka nolosha.
Awoodda lagu heli karo kaftan xaalad kasta ayaa ka dhigaysa mid aad u fudud in la joogteeyo farxad xitaa marka ay jiraan dhibaatooyin.
Awood la'aanta in la aqbalo xaqiiqda waxay keenaysaa xanuun badan marka horeba xanuun baa jira. Aqbalaaddu waa aqoonsiga xaqiiqda ama habraac ama xaalad iyada oo aan laga dhiidhin.
Si aad u barato aqbalaadda, qirashada cilladahaaga, awoodahaaga, iyo daciifnimadaada ayaa lama huraan noqda.
Ugu dambeyntii, aqbalaadda ayaa kaa caawin doonta inaad la qabsato oo aad koraan xitaa xaaladaha aan fiicnayn.
Cilmi -baadhistu waxay muujisay in cafiska kuwa na dulmiyay ay yarayso cadhada, dhaawaca, walbahaarka, iyo niyad -jabka aan u badan nahay inaan la kulanno.
Qabashada ciilka iyo cadhada waxay kaliya noo keenaysaa xanuun badan iyo calool xumo, taasoo siinaysa dembiilaha awood inagu saraysa.
Erayada Dalai Lama: inaadan ku falcelin taban ama aadan u bixin shucuur taban, micnaheedu maahan inaadan ka jawaabin falalka ama inaad u oggolaato naftaada in mar kale lagu waxyeeleeyo.
Tani waa tiir ka mid ah tiirarka farxadda ee dib u eegista buuggan.
Sida laga soo xigtay Abrams, "mahadnaqidu waa aqoonsiga wax kasta oo nagu haya shabakadda nolosha iyo wax kasta oo suurta -geliyey inaan helno nolosha aan haysanno iyo xilligan aan la kulanno."
Mahadnaqgu wuxuu nagu dhaqaajiyaa inaan qaddarinno waxaan haysanno halkii aannaan haysan, ku biiritaankeeda farxaddu waxay naga caawisaa inaan dareemo dareenno wanaagsan oo wanaagsan oo aan dhisno xiriirro xooggan.
Dalai Lama wuxuu yiri, "Markaan ka fekereyno inaan ka yareyno dhibaatada dadka kale, dhibaatadeena waa la yareeyaa."
U damqashadan dadka kale iyo naftuba waa naxariis.
Naxariistu waxay noo sahlaysaa inaan la macaamilno dadka kale, xagga caafimaadkana, waxay hoos u dhigtaa garaaca wadnaha, waxay yaraysaa halista cudurrada wadnaha.
Cilmi-baaristu waxay muujisay inay leedahay saldhigga neerfaha, oo dhaqaajiya xarumaha raaxada ee maskaxda.
Falalka deeqsinimada oo aan la filanayn wax soo noqosho ah ayaa cadeeyay inay u fiican yihiin caafimaadka jirka iyo maskaxda labadaba.
Dadka deeqsinimada leh ayaa naftooda ku faraxsan, sidaas awgeed waxay abuuraan farxad waarta.
WAA MAXAY KITAABKA FARXADU SU'AAL GUBAN? DIB U EEGID
Hal su’aal oo gubanaysa ayaa hage u ahayd buugga dib u eegista farxadda.
Sheekooyinka iyo dhaqamada ruuxiga ah ee Dali Lama iyo Archbishop Desmond Tutu labaduba waxay daaha ka rogeen jawaabaha su'aasha gubatay: Sideen ku helnaa farxad marka la eego dhibaatada nolosha lama huraanka ah?
Akhri: 15 Buugga Sheeko Jacayl Ee Ugu Fiican Adduunka | 2022
KITAABKA FARXADU MA BUUG DIINI AH?
Buugga farxadda ayaa sida ugu wanaagsan loogu tilmaamaa inuu yahay kitaab qoto dheer, is-caawimaad, oo aan ahayn mid diimeed tan iyo markii nuxurkiisu uu u jihaysan yahay xagga ruuxa xagga dareenka aadanaha in kasta oo wada-xaajoodyada diimaha ay sababtay.
Buugga DIB U EEGIDDA FARXADDA
Buugga farxaddu ma aha nooca buugga aan caadiyan u aadi lahaa maadaama aanan si gaar ah ugu janjeerin dhanka buugaagta is-caawinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u arkay inay tahay mid aad u xeel dheer, kaftan ah, dabcanna waxtar leh.
Buuggu wuxuu ku jiraa wada-hadal toddobaad ah oo u dhexeeya Dalai Lama iyo Archbishop Desmond Tutu oo ku saabsan sida aan u heli karno farxad xitaa marka aan wajahayno silica lama huraanka ah.
Asal ahaan waxay leedahay saddex qaybood, waxayna ku bilaabatay Archbishop Desmond Tutu iyo Douglas Abram oo u socdaalay Dharamsala, India, halkaas oo ay kula kulmeen Dalai Lama.
Labaduba waxay wadaagaan sheekooyin iyo casharo nololeed oo dib ugu noqda haadka xusuusta sida Douglas Abram uu ku toogtay su'aalo kala duwan oo ku saabsan silica, nolosha, iyo dhimashada.
Qaybta labaad ee buuggu waxay dejisay siddeeddii tiir ee farxadda. Ugu dambayntiina, qaybta saddexaad ee buugga, waxay wadaageen dhaqamada farxadda maalinlaha ah.
Waxaan rumeysanahay in buugga farxaddu uu ka soo baxay ujeeddooyinkiisii ​​oo ay ka mid yihiin bixinta saldhig wax ku ool ah oo lagu kobcinayo farxadda, iyo sidoo kale masruufka farxadda ka dib markii la helo xitaa marka ay jiraan dhibaatooyin.
Waxa kale oo ay caddaynaysaa in aanay suurtogal ahayn in la ogaado wanaagga haddii aynaan la kulmin xumaanta.
Waxaan kula talinayaa buuggan farxadda dadka raadinaya farxad oo jecel inay ka eegaan dhinacyada kala duwan ee noloshu; waa dib u eegistayda daacadda ah.
Dhab ahaantii waa nooca buugga oo si isdaba joog ah loo akhriyi karo, isagoo leh wax cusub oo la siiyo wakhti kasta.
Su'aalaha la isweydiiyo ee Dib u eegista buugga farxadda
Sidee Dalai Lama u qeexaa farxadda?
Dalai Lama wuxuu ku qeexay farxadda mid adkeysi leh, oo waarta farxad.
Yaa ahaa sheekeeye buugga farxadda?
Douglas Carlton Abram ayaa ka sheekeeyay buugga farxadda.
Waa maxay ujeeddada buugga farxaddu?
Ujeeddada buuggu waa in la bixiyo saldhig wax ku ool ah oo ku saabsan beerista iyo quudinta farxadda.
Ma ku heli karaa buugga farxadda warqad ahaan?
Haa, buugga farxadda waxaa lagu heli karaa warqad.
Imisa bog ayaa ku jira buugga farxadda?
Buuggu wuxuu ka kooban yahay 368 bog.
Dib u eegista buugga farxadda, labada Dalai Lama iyo Archbishop Desmond Tutu waxay lahaayeen qaybtooda u gaarka ah silica, u adkaysiga dhibaatada, iyo masaafurinta, haddana waxay kobciyeen oo joogteyn farxad qoto dheer.
Dhammaanteen waan heli karnaa farxad, waari karnaa, oo iftiimin karnaa. Marna aad daah uma aha, sababtoo ah sida uu Archbishop yiri: "maalin kasta waxaan abuurnaa oo dib u abuurnaa nolosheena. Tani waa awooda aan soo saarno. Ma jiro mugdi mugdi ah oo mustaqbalkayaga go'aaminaya."
Haddaba islaantii, aan hore u soo sheegay, iyo dhammaan kuwa kale ee farxad doonka ah, akhriya kitaabka farxadda. Tani waa dib u eegis daacad ah oo ku saabsan buugga farxadda.
15ka Buugaag ee ugu naxdinta badan abid | 2022
Buugaagta Jaceylka Ugu Fiican Adduunka | 2022
Dib -u -eegista onlaynka ah ee Harris Poll 2022: Fadeexad Goob kale oo Sahamin ama Sharci ah?
Shirkaddu waxay had iyo jeer dooneysaa inay ogaato sida badeecadooda ama adeegyadooda ay u arkaan dadweynaha, si aad ah…
Bal qiyaas in ay kugu adagtahay in aad kaydiso taxane xog muhiim ah oo faa'iido leh iyo faylalka kaydintaada: flash drive…